स्कुटी सररर - बजार रिपोर्ट - नारी
स्कुटर नचलाउने केटीलाई बैंकतिर बिग नो हुन्छ’–सिटिजन बैंककी उमङ्ग शर्माले बैंकमा महिलाले जागिर खाने सवालमा राष्ट्रिय मिडियामा बोलेका कुरा हुन् यी । स्कुटर अहिले महिलाको करियर र व्यावसायिकतासँग जोडिएर आएको छ । सवारी साधनले मानिसको समय बचाउने मात्र नभइ ‘स्टाटस’ बताउँछ ।
‘व्यस्त जीवनको दौडका लागि छरितो साधन साबित हुँदैछ स्कुटर,’ एम.भी. दुगडकी ब्रान्ड हेड विमला थापा भन्छिन्–‘यसको माध्यमद्वारा समय व्यवस्थापन त हुन्छ नै, अहिले आएर यो व्यक्तिको सिम्बोल अफ स्टाटस पनि बन्दैछ ।’ महिलाहरू कामकाजी हुन थालेपछि स्कुटरको व्यवसाय बढी फस्टाएको थापाको भनाइ छ । सुरुवाती दिनमा डिलाइफले नेपाल भित्र्याएको इटालियन ब्रान्ड भेस्पा गत वर्षदेखि एम.भी. दुगडले नेपालभर बिक्री–वितरण गर्दै आएको छ ।
२ लाख ६० हजारदेखि ३ लाख ९५ हजारसम्म मूल्य पर्ने भेस्पा स्कुटरको दुनियाँमा अगाडि रहेको बताउँदै थापाले भनिन्–‘स्कुटर मन पराउनेहरूको अन्तिम लक्ष्य भेस्पा नै हुन्छ ।’ अहिले भेस्पामा ६ वटा मोडल छन् । १ सय २५ सिसी नोटे मोडलको भेस्पा कालो रंगको छ, जुन अहिले बढी नै चल्तीमा छ । एम. भी. दुगडका उपाध्यक्ष विजय महतो भन्छन्–‘यसअघि नेपालीहरूले १ सय १० सिसी र १ सय २५ सिसीका स्कुटर चढिरहेका थिए । सवारी साधनमा नयाँ टेस्ट खोजिरहेकाहरूलाई १ सय ५० सिसीयुक्त पियाजियो इटालियन ब्रान्डका भेस्पा र अप्रिलियाले खुसी दियो । त्यसैले भेस्पाको विश्वव्यापी नारा नै ‘इट्स माई भेस्पा’ छ । स्मार्ट लुक्स र कलर भेरियसन, कम्फर्ट, इन्जिन भेरियसन, सिटिङ एरेन्जमेन्टको विविधता, साढे ६ लिटरको इन्धन ट्यांकी तथा बलियो र भरपर्दो इन्जिन भेस्पाका विशेषता हुन् । अस्ट्रियाको मान्छे भेस्पा चढेर नेपाल आएको रेकर्ड भएको महतो बताउँछन् । भेस्पाको ग्राउन्ड क्लियरेन्स अन्य स्कुटरको तुलनामा बढी छ ।
पियाजियो भेइकल प्रा.लि. इटालीकै अर्को उत्पादन अप्रिलिया सन् २०१५ देखि नेपाल भित्रिएको हो । यो स्ट्रोम, एसआर १ सय २५, एसआर १ सय ५०, एसआर १ सय ५० रेस गरी ४ वटा मोडलमा उपलब्ध छन् । इटालियन ग्राफिक्स, अनरोड र अफरोड दुवैका लागि उपयुक्त, मोटरसाइकल जत्तिकै आरामदायी, बलियो तथा भरपर्दो पाटपुर्जा अप्रिलियाका विशेषता हुन् । बजारमा अपलब्ध अन्य स्कुटरको भन्दा यसको टायर मोटो छ, जसले गर्दा चिप्लिने डर हुँदैन । २ लाख २४ हजार ९ सय सयदेखि २ लाख ९३ हजार ९ सयसम्म पर्ने अप्रिलिया पहेंलो, रातो, सेतो, कालो, नीलो र मल्टिकलरमा उपलब्ध छन् । १८ देखि ३५ वर्षका युवाहरूले अत्यन्तै मन पराएको अप्रिलिया मध्यम र उच्च वर्गको पकडमा छ । भेस्पा भने स्कुले युवादेखि ६० वर्षसम्मका लागि प्रिय बनेको छ ।
सब्रिना होटलकी एक्ज्युकेटिभ पूनम थापा भन्छिन्–‘स्कुटरले मेरो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवन सन्तुलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । बिहानै कलेज, दिउँसो अफिस अनि घरपरिवार व्यवस्थापन महिलाका लागि सहज होइन तर स्कुटर चढ्न थालेदेखि मैले सबैतिर समान रूपमा समय दिन भ्याएकी छु ।’ थापाका अनुसार व्यावसायिक महिलाका लागि समय व्यवस्थापन गर्न स्कुटर वरदान साबित भएको छ ।
अटो लाइफ नेपालले पहिलो पटक टिभिएस स्कुटी पेप नेपाल भित्र्याएको थियो । स्कुटर भन्नेबित्तिकै स्कुटी पेप दिमागमा आइहाल्ने त्यतिबेलाको उक्त स्कुटर निकै लोकप्रिय थियो । रातो, बैजनी र सिम्रिक कलरका पेप स्कुटी एकताका नेपाली बजारमा निकै गुडेका देखिन्थे । महिलाका लागि उपयुक्त सवारी साधनको दुनियाँमा स्कुटर पेपको ठूलो योगदान छ ।
नेपालस्थित हिरो मोटर कर्पको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जनरल मार्केटिङकी मिडिया कोअर्डिनेटर शीतल दाहाल भन्छिन्– ‘सुरुवाती दिनमा स्कुटर चढ्ने महिला वास्तवमै हिरो कहलिन्थे । अहिले यो करियर र व्यावसायिकतासँग जोडिएको छ । प्रोफेसनलहरूका लागि स्कुटर सहज माध्यम बनेको छ । व्यस्त सहरमा हुने ट्राफिक जामका कारण गाडी हाँक्दा बढी समय लाग्ने र पार्किङको समेत असुविधा हुने हुँदा यस्तो अवस्थामा स्कुटर छरिता र सजिला हुन्छन् । गाडीजस्ता महँगा पनि हुँदैनन् ।’
दाहाल भन्छिन्–‘हिरोका प्लेजर, ड्यास, ड्युट, मेस्ट्रो एज्ड गरी चारवटा मोडलका स्कुटर छन् । सुलभ मूल्यमा सुविधायुक्त सवारी साधन त्यो पनि छुट र उपहारसहित हिरोका विशेषता हुन् ।’ भारतीय ब्रान्ड हिरोको प्लेजर एसियन मुलुकमा प्रसिद्धि कमाएको स्कुटर हो । अहिले हिरोसँग भएको १ सय २५ सिसीको डेस्टिनीको नारा ‘मेरो परिवारको नयाँ सदस्य’ छ । दाहालले थप्छिन्–‘यसमा आइदर स्टार्ट स्टप सिस्टम आइथ्रीएस हुन्छ । लामो समय जाममा पर्दा अनावश्यक रूपमा इन्धन खर्च समस्यालाई ध्यानमा राखेर स्कुटरमा ५ मिनेटमा आफैं बन्द हुने प्रणाली राखिएको छ । त्यस अवस्थामा पुन: स्टार्ट नगरी एक्सिलेटर बटार्नेबित्तिकै आफैं गुड्न थाल्छ ।’ फुल अप्सनयुक्त यो स्कुटरको मूल्य २ लाख ६ हजार पर्छ । सुलभ मूल्यमा धेरै सुविधा प्राप्त हुने भएकाले हिरोका स्कुटर अहिलेसम्म पनि उत्तिकै रुचाइएको शीतल बताउँछिन् ।
नेपाल जनरल मार्केटिङ प्रा.लि., टेकुका सेल्सम्यान सञ्जीव मानन्धर भन्छन्–‘भारतीय कम्पनी हिरोका १ सय २५ सिसीका डेस्टिनी, १ सय ११ सिसीका माइस्टो एज्ड र डोयट, १ सय १० सिसीका प्लेजर प्लस तथा १ सय २ सिसीका प्लेजर छन् । १ लाख ७६ हजार ५ सयदेखि २ लाख ६ हजारसम्म मूल्य पर्ने यी स्कुटर आरामदायी र बलिया छन् ।’ हिरोका स्कुटरमध्ये अहिले प्लेजर र डेस्टिनी बढी बिक्री भइरहेको उनले बताए । यसमा खैरो र रातो कलर बढी रुचाइएको छ । हिरोको खरिदमा ५ वर्षे इन्जिन वारेन्टी, ९ वटा फ्रि सर्भिसिङ र एउटा हेलमेट फ्रिसहित क्यास भुक्तानीमा ५ हजारको छुट पाउन सकिने जानकारी मानन्धरले दिए ।
डियो, एक्टिभा, एभियटर आदि नाम चलेका स्कुटर उत्पादन गर्ने भारतीय कम्पनी होन्डाका दुइपांग्रे सवारी साधन बिक्री–वितरण गर्दै आएको ज्योति समूहअन्तर्गतको होन्डाले थप नयाँ ग्रेजिया, नाभी, डियो डिएलएक्स बजारमा ल्याएको छ । होन्डाका सेल्स हेड सोहनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्–‘होन्डाको अर्को नाम नै बढी टिकाउ हो । होन्डाका जति पनि सवारी छन् ती सुविधायुक्त, आरामदायी र बलिया छन् । अर्को कुरा डियो र एभियटरले स्कुटर बजारको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ ।’
२ लाख ७ हजार ९ सय रुपैंयाँ पर्ने डियो डिएलएक्सदेखि लिएर १ सय २५ सिसीको २ लाख १४ हजार ९ सय मूल्य पर्ने एक्टिभासम्मका फिचर हेर्ने हो भने कम इन्धन खपत, बढी माइलेज, आरामदायी सिट, उपयुक्त ग्राउन्ड क्लियरेन्स, मोबाइल चार्जिङ सकेट, अटोमेटिक हेडल्याम्पलगायतका सुविधा छन् ।
जापानी कम्पनी सुजुकीले गाडी, मोटरसाइकल मात्रै नभएर स्कुटर पनि नेपाली बजारमा पठाएको छ । टिकाउको पर्यायवाची भनेर चिनिने सुजुकी ब्रान्डका १ सय २५ सिसीका सुजुकी एक्सेस, १ सय २४ सिसीका सुजुकी बर्गम्यान स्ट्रिट, सुजुकी एक्सेस न्यू आदिका स्कुटर नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् । साढे पाँच लिटर इन्धन अट्ने ट्यांकी, प्रतिलिटर ४६ किलोमिटर माइलेज, बलियो डिसब्रेक यी स्कुटरका विशेषता हुन् ।
यीबाहेक नेपालमा चाइनिज यिङयाङ तथा टेरा मोटर्सका इलेक्ट्रिक स्कुटर पनि भित्रिएका छन् । यस्ता इलेक्ट्रिक स्कुटर विभिन्न रंग र मोडलमा उपलब्ध छन् । इन्धनको साटो बिजुलीबाट चार्ज गरे पुग्ने यस्ता स्कुटर पनि ग्राहकले निकै रुचाएको सम्बन्धित व्यापारीहरू बताउँछन् ।
आश्विन १३, २०७२ - स्टार्ट स्कुटी (तयार)